टिकटकका भाइरल भिडियोहरु अब आइफ्लिक्समा उपलब्ध, के नेपाली यूजरले पनि हेर्न पाउँछन् ? - Technology Khabar
» टिकटकका भाइरल भिडियोहरु अब आइफ्लिक्समा उपलब्ध, के नेपाली यूजरले पनि हेर्न पाउँछन् ?
काठमाडौं । भिडियो शेयरिंग प्लेटफर्म टिकटकले भिडियो अन डिमान्ड इन्टरटेनमेन्ट सर्भिस आइफ्लिक्ससँग सहकार्यको घोषणा गरेको छ । सो सहकार्यअन्तरगत टिकटकका छोटा/छोटा भिडियोहरु अबदेखि आइफ्लिक्समा उपलब्ध हुने भएका छन् ।
टिकटकले दक्षिणपूर्वी एशियाली भिडियो अन डिमान्ड इन्टरटेनमेन्ट सर्भिस आइफ्लिक्ससँगको सहकार्यमा एशियाका १३ देशहरुका अडियन्सहरुलाई साना भिडियोहरु उपलब्ध गराउने छ ।
यसको लागि आइफ्लिक्समा छुट्टै ‘टिकटक’ च्यानल हुनेछ । जहाँ विश्वभरबाट विभिन्न क्याटोगरीमा भिडियोहरु राखिने र यूजर्सले हेर्न सक्नेछन् । क्याटोगरीहरुमा ट्राभल, कमेडी, पेट्स, स्पोर्टस, र लाइफस्टायल रहेका छन् ।
सो च्यानलमा भाइरल भिडियोहरु हुने र यसले जनचेतनाका साथै आफ्नो एपको बारेमा समेत जानकारी दिने टिकटकले बताएको छ ।
नेपालमा पनि आइफ्लिक्सको सेवा उपलब्ध रहेको छ, तर सो टिकटक च्यानल नेपालमा प्रयोगकर्ताहरुले हेर्न सक्छन वा सक्दैनन भन्ने बारेमा केहि जानकारी छैन् । आइफ्लिक्सले नेपाली बजारमा एनसेलसँगको सहकार्यमा भिडियो अन डिमाण्ड सेवा दिईरहेको छ । त्यसैले संभवत टिकटक च्यानल नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई पनि उपलब्ध हुनसक्ने देखिन्छ ।
ह्वाट्सएपको नयाँ गोपनीयता नीति स्वीकार नगरेपनि एकाउन्ट डिलिट नहुने
आईफोनका ९० प्रतिशत मोडलमा आईओएस १४: प्रतिवेदन
चर्चित मोबाइल गेम ‘पबजी’ का कारण एक भारतीयले गरे आत्महत्या
स्टार्ट बटमका साथ माइक्रोसफ्टको विण्डोज १० सार्वजनिक
१५ आश्विन २०७१, बुधबार